Engathi abantu bayazifela nge-ANC – LIVE Express
Msizi Zondi | 15 March 2016 | Columns, Views |
Inqwaba yemibhikisho emayelana nokungagculiseki kwamalunga omphakathi ngalabo abasuke bephakanyiselwe ukungenela izikhundla zobukhansela emawadini kungenzeka ukuthi iyizinkomba zokuthi iningi labantu bakuleli liyalithanda futhi liyalethemba iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), okunamanye amaqembu.
Ngesonto eledlule umphakathi waKwaSithebe, eMandeni, uvuke umbhejazane, ubhikisha, uthi awumfuni lowo ophakanyiselwe ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngaphansi kwe-ANC.
Kucace ngokusobala ukuthi lo mphakathi ubuzimisele ukwenza noma ngabe yini ukuze ugcine uwunqobile lo mzabalazo wawo. Lokho kufakazelwe nawumyalezo oshubile obuthunyelwa kwiziphathimandla njengoba kugcine sekushiswa ngomlilo impahla eningi okubalwa kuyo amafemu ayi-8 kanye namaloli.
Kulo mbikisho odonse isonto lonke kuze kwalamula ukuthi i-ANC imemezele ukuthi isithathe isinqumo sokumhoxisa lowo obezongenela isikhundla sobukhansela kule ndawo.
Emva kwalokho umphakathi ubonakale wehlisa imimoya nokubikwa ukuthi isimo siya ngokubuyela kwesejwayelekile kule ndawo.
NaseFolweni, eNingizimu neTheku, yiso leso. Kuthiwa umphakathi wakhona ongamalunga noma abalandeli be-ANC uthukuthele ugane unwabu ngesiphakamiso salowo ozomela ukhetho. Bathi ‘bafunziwe’.
Okudidayo-ke la ukuthi i-ANC ukuphela kweqembu elinomuntu yini ongangenela esobukhansela kule ndawo? Aphi ama-candidate akwamanye amaqembu? Maybe yizinkomba zokuthi abantu bakule ndawo kanye nezinye eziningi abaziboni bephethwe ngelinye iqembu ngaphandle kwe-ANC.
Ubani othe leli khansela noma i-ANC iyona ezonqoba ukhetho kule ndawo nakwezinye okusuke kubhikishwa kuzona? Amanye amaqembu wona awanabo yini abantu abazowamela? Uma bekhona umphakathi awubazi yini? Ngoba phela uma bekhona angeke saba khona isidingo sokubhikisha – okwabo besekuzoba ukulinda nje kancane kufike ukhetho bese bevotela lowo abamthandayo.
Okukanye kungenzeka ukuthi uma bekhona abamanye amaqembu umphakathi awubathembi? Kodwa omunye uzobuza ukuthi uma nakwamanye amaqembu bekhona abantu abangathenjwa umphakathi, abaphakanyiselwe ukungenela ukhetho, pho kungani bona bengabhikishelwa?
Akuve yini kuyingxenye ethile yamalunga eqembu kwi-ANC agaqele izikhundla nokuyiwona agqugquzela le mibhikisho besebenzisa umphakathi ukulwa izimpi zangaphakathi? Kuyaziwa ukuthi isikhundla sokuba ikhansela sivamise ukuthi kube nabantu abaningi abasiconsela amathe ikakhulukazi njengoba lowo ositholile esuke ezosiqhoqhobala iminyaka emihlanu yonke.
Okunye okusuke kuqinisekisiwe yi-income for the next five years ngale kokuthi ukwenzile yini obukuthembisile kubantu noma cha; i-power ne-control yezinto ezenzeka emphakathini and also the access to resources.
Yize noma bekhona abakwaziyo ukukwamukela ukuthi abakhethwanga kodwa kunalabo abangancamela ukuthi kubhubhe izwe uma nje bona bengangenanga ezikhundleni.
Uma kuwukuthi le mibhikisho kusuke kungesiyona eyomphakathi wonke kodwa kusuke kungeyamalunga noma abalandeli be-ANC; is it fair kwabanye abantu ukuthi kume yonke into emphakathini kuze kushiswe nezimboni ezibeka isinkwa etafuleni kubantu abalinganiselwa ku-25 000 ngenxa nje yombango wezikhundla eqenjini elilodwa?
Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email: views@liveexpress.co.za
BUKA: Kosolwa ukuthi kuphanjaniswe amaphepha ngokungasuli kukaMugabe